हाम्रो शिक्षा कहाँनिर चुक्यो ?
प्रकाशित मिति : Thu-22-Sep-2016
- डा. केदारमणि नेपाल / डा. दीपक बस्याल
केही समयअघि केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको आवास छोडेपछि एउटा समाचार चर्चामा आयो, प्रधानमन्त्रीको भान्साबाट भाँडाकुँडा लगायतका सामानहरु हराए । त्यसपछि अर्को कुराको चर्चा भयो, जम्मा सात जना खेलाडी सहभागी रहने नेपाली ओलम्पिक टोलीमा त्योभन्दा कयौं बढी अधिकारी सामेल थिए ।
यस किसिमका समाचार हाम्रा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरुमा आइरहेका हुन्छन् । आखिर यस्ता घटना पटकपटक किन हुन्छन् त ?यो समस्या अल्पविकसित विश्वको साझा समस्या हो ? विकसित विश्वमा कस्तो हुन्छ ? समस्याको चुरो चाहिँ कहाँ छ त ?
नेपाल र अमेरिका दुवै ठाउँमा पढेको अनि पढाएको अनुभव भएको आधारमा हामीले आफ्नै अनुभव अनि भोगाइलाई समेटेर यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं ।
सबैभन्दा पहिले एउटा अवस्थाको कल्पना गरौं । मानौं, तपाईंकी छोरी स्कूलमा पढ्दै छिन् । एकदिन शिक्षकले भर्खरै भएको परीक्षामा छोरीले ९० प्रतिशत अंक ल्याएको कुरा सुनाए । त्यो वेला तपाईंलाई पक्कै खुशी नै लाग्छ । तर, केही दिनपछि त्यो कक्षाका बाँकी सबै विद्यार्थीले ९० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएको कुरा थाहा पाउनुभयो । अब चाहिँ तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ? सायद हामीले यहाँ लेखिरहनु परेन ।